ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာပတ်ဆိုများ | တိုယိုတာပတ်ဆိုကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Grey Toyota Passo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Pearl White Toyota Passo 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Beige Toyota Passo 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Pearl White Toyota Passo 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Silver Toyota Passo 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl gold Toyota Passo 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Silver Toyota Passo 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
Silver Toyota Passo 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
White Toyota Passo 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်...
Grey Toyota Passo 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
White Toyota Passo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Grey Toyota Passo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Pearl White Toyota Passo 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Silver Toyota Passo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Lks 76 ညှိနှိုင်း
White Toyota Passo 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်...
Orange Toyota Passo 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Smart Key. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Black Toyota Passo 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Red Toyota passo 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Black Toyota Passo 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl white Toyota Passo 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger....
Grey Toyota Passo 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင်း...
Black Toyota Passo 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
တိုယိုတာ ပတ်ဆိုများဟာ မီနီကား အမျိုးအစား တစ်ခုအနေနဲ့ ပြည်တွင်း အိမ်စီး ကားဈေးကွက်မှာ ထင်ရှားပါတယ်။ ရိူးရွန်များက မှာယူပြီးသားတစ်ခုအနေနဲ့ တင်သွင်းရောင်းချမူတွေ ရှိသကဲ့သို့ ပြည်တွင်း လူထုကလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဈေးသက်သာမူ၊ ဆီစား သက်သာမူ၊ နေရာအရွှယ်အစား သက်သာမူတို့ဖြင့် လူထုရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိင်ခဲ့ပါတယ်။ နစ်ဆန်း မတ်ခ်ျ နဲ့ ဒိုင်အီဟတ်ဆု မီရာတို့လို ကားသေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးပါပဲ။ ပြည်တွင်းမှာ တော့ တိုယိုတာ ပတ်ဆိုလို ဆိုလိုက်တာနဲ့ သိသာစေတဲ့ ကားတစ်မျိုးပါ။ အင်ဂျင်သေးပါတယ်။ အင်ဂျင် ၁၀၀၀ စီစီနဲ့ ၁၃၀၀ စီစီတို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၁၃၀၀ စီစီကို လူကြိုက်များပါတယ်။
ရှေ့ခေါင်းက လေးထောင့်မကျတစ်ကျနဲ့ ကားအသေးပုံစံဝင်ပြီး ကားအတွင်းဖက်မှာလည်း ထိုင်ခုံနေရာ စားသက်သာအောင်လို့ ဂီယာဘောက်စ် နေရာမှာ ဟန်းဂီယာကို လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အတွင်းခန်းကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ သေးသေးသွယ်သွယ်လေးပါပဲ။ ပတ်ဆိုက်ို ပတ်ဆို ဆတ်တယ် ၇ယောက်စီး ကားအမျိုးအစားတစ်ခုအနေနဲ့လည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဌင်းကတော့ MPV ကား အမျိုးအစားဝင်ကာ ထိုင်ခုံက သုံးတန်းဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းက တိုယိုတာ အယ်ဖတ်နဲ့ဆင်ပြီး ဂီယာဘောက်စ်တွေကအစ အယ်ဖတ်ဂီယာ ဘောက်စ်လို့ ကားအရှေ့ ဒတ်ခ်ျ ဘုတ်မှာ ပါရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းခန်း၊ ကားတံခါးကအစ ပုံစံကတော့ ပတ်ဆိုရဲ့ ပုံစံအတိုင်း ရိုးရိုး ရှင်းရှင်းကြီးပါပဲ။
တိုယိုတာ ပတ်ဆိုများကို တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာ ဒိုင်အီဟတ်ဆု ဘွန်ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခုအနေနဲ့ ရောင်းချလျက်ရှိပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကနေ ယနေ့အထိ ထွက်ရှိလျက်ရှိပါတယ်။
ကားအသေးစားလေးတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အင်ဂျင် ၁၀၀၀ စီစီကနေ ၁၃၀၀ စီစီဆိုတဲ့ အင်ဂျင် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးကို ထုတ်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွေ ဖြစ်ပြီး ဂီယာက အော်တို လေးချက် ဂီယာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ပတ်ဆိုလေးတွေမှာ တီဗီ တို့ကို တပ်ဆင်ပါရှိလာတာကို တွေ့ရပါမယ်။ တစ်ချို့တွေကလည်း အနောက် ကင်မရာတို့ကို ပြန်လည် တပ်ဆင်ခြင်းတွေပါ ရှိလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အနောက်ကတော့ နောက်ထပ် နှစ်ယောက်ထိုင်လို့ရပြီး နောက်ဖုံးဖွင့်ပြီး ပစ္စည်း ထည့်လို့ရမဲ့ နောက်ဖုံးပါ ပါမယ်။ ပါဝါ ၀င်ဒိုးပါမယ်။ စမတ်ကီး တို့ကို ပါရှိပြီး ရိုးရှင်းလှတဲ့ ပတ်ဆိုလေးတွေပါပဲ။ အရောင်ကိုတော့ အဖြူရောင် အပြင် အမည်း၊ ငွေရောင်၊ မီးခိုး စတဲ့အရောင်တွေကို ရွေးချယ်နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ပတ်ဆိုကားတွေဟာ စူပါ မီနီ ကား အုပ်စုထဲမှာ ပါရှိသည့် နည်းတူစွာ အရွယ်အစား သေးငယ်ကြပါတယ်။ သေးငယ်ပေမဲ့လို့ လူ (၅) ယောက်စီး ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားအပြင်ဖက် ကားပုံသဏ္ဍာန်မှာ လေးထောင့်ဆန်ပြီး ထိပ်ပိုင်း ဘော့နက်ကိုတော့ အနည်းငယ် လုံးသယောင်ရှိပါတယ်။ အနောက်ပိုင်းမှတော့ နောက်သုတ်မီး အပါအ၀င် မှန်အနက် ဖြစ်ကာ မီးလုံးက နည်းနည်း ရှည်မျောမျောပုံစံကျစွာ ကားကို အလှဆင်ထားပါတယ်။ အတွင်းခန်းအနေနဲ့ အတွင်းတွင် ဟန်းဂီယာတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကား ဒိုင်ခွက်ကတော့ ကားအရွယ်အစားနဲ့ ကိုက်ညီစွာပဲ သေးငယ်ပါတယ်။ ဒတ်ရှ် ဘုတ်မှာ ကားအတွက် တီဗီနဲ့ အနောက် ပါကင်စနစ်အတွက် တပ်ဆင်ရန် နဲ့ အသုံးပြုရန် နေရာကို ထားရှိပေးထားပါတယ်။ အနောက်ခန်းမှာ ထိုင်ခုံကို တစ်တန်းတည်း အနေနဲ့ သုံးယောက်ထိုင်နိုင်တာကို တွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းက တစ်ပတ်ရစ် ပတ်ဆိုများ
ပြည်တွင်းမှာတော့ စလစ်လွတ်သွင်းလို့ရတဲ့ ၂၀၀၇ ကနေ နောက်ပိုင်းကို အသွင်းများပါတယ်။ အင်ဂျင်ကို ၁၃၀၀ အရွေးများပြီး ၂၀၁၁ ပတ်ဆိုတွေနဲ့ ပတ်ဆို အရှည်ကား ပတ်ဆို ဆတ်တယ်ကားတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆတ်တယ်ကတော့ အင်ဂျင် ၁၅၀၀ ရှိပါတယ်။
ပတ်ဆိုလေးတွေကို အနည်းဆုံး ဈေးနှုန်း ကျပ်သိန်း ၁၀၀ လောက်မှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး သိန်း ၈၀ နဲ့ သိန်း ၉၀ မှာလည်း ရနိင်ပါမယ်။ ပတ်ဆို အရှည်ကား ဆတ်တယ်ကားတွေကိုတော့ ကျပ်သိန်း ၁၃၀ ၀န်းကျင်လောက် မှာ ရရှိနိင်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ပတ်ဆို တွေဆို ကျပ်သိန်း ၁၃၀ လောက်ရှိပါတယ်။
တိုယိုတာ ပတ်ဆိုလေးတွေဟာ ကား အငယ်စား အသေးစားလေးတွေ ဖြစ်သလိုပဲ ဌင်းရဲ့ အင်ဂျင်ကလည်း ၁၃၀၀ စီစီမှာ အများဆုံး တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တွင်း မှာ အထူးသဖြင့် အိမ်စီး၊ နဲ့ အဌားယာဉ်များ အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ အားသာချက် တစ်ခုအနေနဲ့ ကတော့ ဈေးနှုန်း သက်သာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။